Dowladda Itoobiya oo warbixin kasoo saartay siyaasadeeda ku wajahan Soomaaliya – Radio Daljir
Dowladda Itoobiya oo warbixin kasoo saartay siyaasadeeda ku wajahan Soomaaliya
Addis Ababa, May 10 -Warbixinta ayaa lagu bilaabay iyadoo dib loo eegayo sooyaalka xidhiidhka labada dal, waxaana Ethioipia sheegtay in cilaaqaadka labada dal uu abid xumaa ,islamarkaasina labada ummadood ay galeen dagaalo ay wasaaradda arrimaha dibaadd Ethioipia ku sheegtay in ay sabab u ahaayeen riyada iyo damaca aan jirin ee ?Soomaali weyn? iyo siyaasadaha Somaalida ee dhul balaadhsiga ah,iyadoo siyaasadaha noocaasi ahi ay Somaaliya dhaxalsiiyeen cadaawad ay u qaado dalalka jaarkeeda ah gaar ahaan Ethiopia.
Dowladda Ethiopia ayaa intaasi ku dartay in Soomaliya ay inta badan isbahaysi la ahayd dhinacyada ka horjeeday dalka Ethiopia oo kharbudayey nabadeeda.
Warbixinta, ayaa sidoo kale lagu sheegay in Somalia ay ku guuleysatay in ay abaabusho Somaalida reer Ethiopia ,si’ay iyada isbahaysi ula noqdaan,islamarkaasina loo fuliyo siyaasadaha dhul balaadhsiga ah ee Somaaliya,waxaana intaasi la raaciyey in qorshahaasi Somaalia uu muujinayey khatarta Ethiopia kaga imanaysay Somaaliya iyo dhinacyo kale.
Ethiopia ayaa warbixinteeda ku xustay in xilligan xaadirka ay arrimuhu si weyn isu bedeleen ,iyadoo meesha laga saaray oo la tirtiray fikraddii ? Soomaali weyn? ,waxana intaasi lagu daray in dadka Soomaalida ee reer Ethiopia ay si walaaltinimo iyo midnimo leh ay iyagu raali ka yihiin ay kula noolyihiin Ethiopian-ka kale ,iyagoo iska tuuray fikraddii Soomaali-weynimadii ay ku taamayeen.
Dhinaca kale, marka la eego wasaardadda arrimaha dibadda Ethiopia aya sheegtay in burburka Soomaliya uu la yimi khatar ba?an oo soo kordheysay xilliyadii ugu dambeeyey ,iyadoo xagjirnimada diinta ee Somaliya ay khatarteeda leedahay,waxana ay intaasi raacisay in canaasiirta nabad-diidka ah ay fadhiisin ka dhiganayaan Soomaliya si’ ay u carqaladeeyaan nabadda Ethiopia.
Ethiopia ayaa markii ay ka hadlaysay muhiimadda xidhiidhka labada dal sheegtay in ay yartahay fursad ay Somaliya suuq ugu noqon karto Ethiopia ,inkastoo haddii nabad iyo deganaansho la helo ay noqonkarto suuq muhiim ah.
Marka ay timaado arrinta khayradka dabiiciga ah ayaa Ethiopia sheegtay in webiyada Somaaliya ay ka yimaadaan Ethiopia ,iyadoo hanaanka waraabka ee webiyadaasi ee dalka Somaaliya ay immika xaaladoodu liidato ,waxana Ethiopia sheegtay in ay horay ugu sii socon doonto dhismaha biyo-xidheeno laga samaynayo dhulka sare ee Ethiopia ee ay ka yimaadaan webiyada Somalia , iyadoo qorshahaasi looga goleeyahay dhinaca waarabka.
Biyo-xidheenadana la dhisayo ayey Addisbaba ku sheegtay in ay Somalia ka tari doonto in ay yaraadaan fatahaadaha webiyada ,iyadoo faa?iidaduna ay noqon doonto mid laba dhinac ah, waxana mashaariicda biyo-xidheenada ka faa?iidaysanaya dadka Somaliyeed ee gobolka Somalida Ethiopia .
Ethiopia ayaa saadaal ku bixisay in arrinta biyo-xidheenadu ay mustaqbalka khilaaf abuuri doonto ,inkastoo khilaafkaasi lagu xalin doono mabda?a loo yaqaan ?isii aan ku siiyee?, oo ah in dhinac walba uu wax ka tago ama wax ka tanaasulo, isagoo wax kale ku bedelanaya.
Ethiopia ayaa sidoo kale sheegtay in dekedaha Somalia ee laga soo bilaabo Zeylac ilaa Kismayo ee gaadhaya 7-da ay faa?iido u leeyihiin ama ay u adeegi karaan Ethiopia ,iyadoo arrintaasi ay wax badan ku biirin karto horumarka Ethiopia ,inkastoo khilaafkii ka dhashay mabda?ii ?Somali weyn?uu xaaladda imminka ka dhigayo in Ethiopia aanay isticmaalikarin dekedaha Somaliya.
Marka ay timaado arrinta Somaliland, Ethiopia ma doorbidayso ictiraaf ay siiso Somaliland ,iyadoo sheegtay in tallaabadaasi ay dareen xun ku abuurikarto qaybaha kale ee Somaliya ,islamarkaasina ay Soomalidu shaki badan ka qaadayaan danta Ethioipia, markaasi iskaashiga lala yeelanyo gobolada Somaalida kuma jirto wax ictiraaf la yidhaahdo oo la siiyo maamulo hoosaadyada Soomaliya.